Munaasabad Quraan Akhris ah oo lagu Khatimay xerada Qaxotiga Xagardheere. | ogaden24
Munaasabad Quraan Akhris ah oo lagu Khatimay xerada Qaxotiga Xagardheere.
Maalin nimadii Shalay oo ay taariikhdu kubeegnayd 18 November 2016 Waxaa xerada qoxootiga Xagardheer ee deegaanka Faafi lagusoo gabagabeeyey akhrinta qur’aanka kariimka ah oo ay bilwalba halmar dhameeyaan Ururka Culimada Ogadenia (UCSO).
Khatinkan qur’aan ee shalay dhacay ayaa waxaa maamusayey gudomiyaha culimo awdiinka ree Ogadeniya laantiisa xagardheer Sh.Osman iyo gudidiisa waxaana kasoo qayb galay inta badan xubnaha Ururka Culimada iyo mas’uuliyiin kale.
Xafladan qur’aanka lagu khatimayey ayaa furantay abaarihii 6:30 subaxnimo xiliga Bariga Africa iyada oo ay culimadu dadbadan oo bulshada kaxanuunsana qur’aan saareen taas oo bulshadu kuxisaabtanto markasta oo ay culimadu isu timaado in ay dhamaan bulshada inta xanuun dareemaysa inay kafaa iidaysato maalinkaa.
Xafladan ayaa soogabo gabawday abaarihii 1:40pm ee galabnimo xiliga Bariga Africa
Waxayna kudhamaatay jawi dagan